Deelqaafka ku jiray Khudbadii Ra’iisul Wasaare Rooble (Qormo kulul) | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
DEELQAAFKA ku jiray Khudbadii Ra’iisul Wasaare Rooble ee dareenka aan ka muujiyay. Sadex qodob ayaanan ku soo koobayaa.
Sadex qodob ayaanan ku soo koobayaa.
1. Arimaha amniga wuxuu sheegay in uu la soo wareegay Amniga doorashooyinka iyo fulinta qorshaha amniga guud ee qaranka.
– Amniga doorashada waa howl farsamo mas’uuliyadeedana waxaa iska leh Ciidanka Booliska heer Federaal iyo heer Dowlad Goboleed. Waana shaqo uu qaban karo Taliye Saldhig isagoo kaashan kara cidii uusan uga maarmeyn. Lkn waxa la isku hayo intaas waa ka mug weynyihiin, taasoo ah awaamiirta Taliyeyaashu bixinayaan, cida ay ka amar qaadanayaan iyo siyaasaadka ay ku shaqaynayaan.
Rooble waxa laga sugayay in uu mas’uuliyada amniga si buuxda ula wareego, badalana Taliyeyaasha dhiiga gacmaha kula jira ee hormuudka ka ahaa dhibaatadii ka dhacday magaalada Muqdisho.
– Fulinta Qorshaha Amniga ee Rooble sheegay hadii uu yahay midkii Farmaajo shalay Golaha Shacabka ka hor sheegay waxaba isma badalin wali, waxayna ka dhigantahay in Farmaajo wali yahay Taliyaha Ciidamada Qalabka Sida, Rooblena uu yahay fuliyaha qorsheyaasha Farmaajo.
Walina waxaan aqrisanaynaa casharadii Farmaajo muddada afarta sano ah noo meerinayay ee ay ugu dambeeyeen weerarkii 19-kii Febraayo uu ku qaaday Madaxweyneyaal, Ra’iisul Wasaare, Musharaxiin, Xildhibaano, Siyaasiin iyo Shacab si nabad ah u bannaanbaxaya.
Weerarkii 14-kii iyo 16-kii Abriil lagu qaaday Taliyihii Booliska Gobolka Banaadir Gen Saadaq Joon iyo duulaankii qorshaysnaa ee guryaheena lagu soo qaaday 25-kii Abriil ee dad shacab ah lagu laayay kuwa kalena lagu barakiciyay, Ciidamada Qalabka Sida-na ku burbureen oo maanta aagag dagaal isaga soo horjeedaan.
2. Ciidamada wuxuu yiri mucaarad iyo muxaafid malahan waxaanan farayaa in ay xeryahooda ku noqdaan, kana fogaadaan in ay ku milmaan arimaha siyaasada. Sidoo kale wuxuu sheegay in loo saarayo gudi farsamo oo ka soo talo bixiya arimaha siyaasadeed ee saameynta ku yeeshay ciidamada.
– Ra’iisul Wasaare Rooble waxaan waydiin lahaa sidee xero u wada geli karaan Ciidamo madaafiic isla dhacay oo dhufaysyo isugu jira iyadoo aan la xalin sababihii dhaliyay arintaan, sidoo kalena aan la samaynin isbadal muuqda oo kalsooni gelin kara labada dhinacba. Sidoo kale sidee isku aaminayaan ama u kala amarqaadanayaan Taliyeyaal kala irdhoobay, mid waliba midka kale xabad ku goobayo, wax xurmo ah oo ka dhaxeysana aysan jirin?
– Siyaasada ciidamada in laga dhex saaro ma xuma lkn Farmaajo makaa yeelayaa, maadaaba ilaa hada ciidamo uu ka soo daabulayo gobolada dalka si uu mar kale ugu isticmaalo siyaasad. Dhanka kale gudiga aad sheegtay in aad magacaabayso sidee loo aamini karaa hadii uu noqdo gudi hal dhinac ah, sooma noqon karo gacmo Farmaajo ku adeegto mar kale?
3. Qodobka ugu dambeeya waa arinta ku saabsan shirka DF iyo DG ee Rooble sheegay in uu ku baaqi doono. Rooble iyo Farmaajo waxay ka mideysanyihiin in aan waxaba lagu darin heshiiskii 17-kii September iyo talo soo jeedintii 16-kii Febraayo wax sharuudo ahna aan lagu xirin. Sida labadooduba shalay ay ku sheegeen khudbadahooda.
– Waxaan su’aali lahaa Ra’iisul Wasaare Rooble hadii howshu sidaas u fududahay maxay Madaxweyneyaasha DG Muqdisho u fadhiyeen mudo 45 cisho, shirkuna u fashilmay, sababayna in dagaal ka dhaco magaaladan.
Aragtideydu kuma dhisna caaddifad ee waxay ka tarjumaysaa waaqica jira.
Waxaanan diyaar u ahay inaan qayb ka noqdo xal walba oo suurtagelin kara in si nabdoon dalkaan doorasho uga dhacdo, dalka iyo dadkana laga samatabixiyo mushkiladaan uu dhex maquuranayo. Ra’iisul Wasaare Rooble waxaan leeyahay abtiyow dhiiqadii Farmaajo lugaha kula jiray yaan adiga lagaaga dhex siibanin ee si xikmadeysan arintaan u wajah, dadkana talada wax ka sii.
Kuwa xamaasadeysan ee raba caaddifad in ay ku majoxaabiyaan dadaalkeenana waxaan leenahay walaaleyaalow Ilaahey iimaanka ha idin geliyo.
W/Q: Hon. Mahad Salad
Somali June 17, 2021
Xog kale oo dheeraad ah ayaa laga helay dhalinyarrada askarta ah ee ku maqan dalka Eritrea, iyadoo lasoo bandhigay xaalada ay ku nool yihiin...
Doorashada June 17, 2021
Xafiiska Ra'iisal wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya ayaa la filayaa inuu maanta shaaciyo Liiska Guddiyada Doorashada Dadbsan ee Federaalka Soomaaliya. Waxaa maanta la gaarsiiyey xafiiska Ra'iisal...
Madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle (Xaaf) ayaa si kulul ula hadlay madaxweynaha xilligan ee Galmudug Axmed Qoorqoor, isagoo xusuusiyey xaaladii ay isla...
Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye ayaa ugu danbeyn maanta magacaabay xubnaha laga bedelay guddigii doorashada ee cabashada laga keenay. Xubnaha Guddiyada Doorashada ee laga soo...
Xukuumadda June 17, 2021
Wasiirka cusub ee Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Xukuumdda xilgaarsiinta Cabdiwahaab Ugaas Xuseen Ugaas Khaliif ayaa fasaxay dhammaan shirkadaha shatiyada loo siiyey inay xoogsatada Soomaaliyeed...
Golaha degaanka magaalada Hargeysa ayaa goor dhoweyd doortay Duqa cusub ee caasimadda Somaliland, magaalada Hargeysa. Waxaa Duqa caasimadda Hargeysa loo doortay C/kariin Axmed Mooge oo...
Caalamka June 16, 2021
Wasiirrada arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo Kenya Maxamed Cabdirisaq Maxamud iyo Raychelle Omamo, ayaa maanta wadahadal ku yeeshay khadka telefoonka. Sida lagu sheegay qoraallo laga...
Xog cusub June 16, 2021
Waxaa soo baxday faragelin ay la kulmeen Guddiga Wasiirada ee Ra'iisal wasaare Maxamed Xuseen Rooble u saaray kala shaandheynta xubnaha Guddiyada Doorashada ee cabashada...
Siyaasiyiinta Waqooyi oo Farmaajo ku eedeeyay inuu farageliyey Guddiyada Doorashada Somaliland
Doorashada June 16, 2021
Golaha Siyaasiinta kasoo jeeda Gobollada Waqooyi ee Somaliland ayaa ku eedeeyay madaxweynaha xilkiisu dhammaaday ee Maxamed C/llaahi Farmaajo inuu faragelin ku hayo Guddiyada Doorashada...
Doorashada June 13, 2021
Fulinta Heshiiskii labaad ee Doorashada Soomaaliya ayaa si gaabis ah ku socda, iyadoo ay Wakiilada Beesha Caalamka shardi adag ku xireen dhaqaalihii laga filayey. Xogta...